CTRL + C e CTRL + V entre Windows e VM Linux dịghị Virtual Box – Taylor Lopes ツ Blog
Na mbụ, M na-ekwusi ike na etinyere ihe ngwọta a na gburugburu ebe a:
– Window Windows 10
Ihe bụ nsogbu bụ na ọ gaghị enwe ike idetuo na mado n’etiti Windows na Linux (kwagidere). Mgbe ị na-eme CTRL + C na CTRL + V, onweghi ihe mere.
Ngwọta ahụ a tụrụ n’otu ntanetị kwuru na iji dozie nsogbu a ezuru iji wụnye ngwugwu ahụ “ọbịa ose” que vem no Oracle VM VirtualBox, mana mgbe m nwara ime nke a, rụpụtara njehie ndị na-esonụ:
"Failed to set up service vboxadd, biko lelee faịlụ log"
Kedu ka m si eji Netinst (ụdị nke Debian), enwere ike na ụfọdụ sọftụwia achọrọ na-efu mgbe ị na-agba ọsọ nke “ọbịa ose”.
Installwụnye nchịkọta ọzọ:
dabara-nweta ịwụnye gcc
dabara-nweta wụnye nzi-ndị isi-$(adighi adi -r)
Instalação do “ọbịa ose”:
// PASSO 4 - echichi!
// PASSO 1 No Oracle VM VirtualBox, acesse o menu Dispositivo > Inserir imagem de CD dos Adicionais para Convidado // PASSO 2 Dar duplo clique no ícone VBOXADDTIONS_5.1.24_117012 (ou outra versão) que vai aparecer na área de trabalho // PASSO 3 Abrir o terminal, acessar o caminho para o VBoxLinuxAdditions, normalmente este: cd /media/cdrom0/ // PASSO 4 - echichi! sudo sh ./VBoxLinuxAdditions*.run
mgbe a, não esqueça de habilitar na VMBox as opções para permitir copiar e colar (área de transferência / bi-direcional), conforme figura abaixo:
Total accesses: 56550
28 July 2017 Taylor Lopes	Ọzọ ka ọbịa, ctrl + c, ctrl + v, gcc, vboxadd, vboxlinuxadditions, virtual igbe, vm, windo
9 reviews “CTRL + C e CTRL + V entre Windows e VM Linux dịghị Virtual Box”
9 October 2018 ka 17:22
Ihe Zit Tooya kwuru:
Na-arụ ọrụ dị ka amara. Daalụ nke ukwuu
4 December 2018 ka 21:39
Parabens edozi nsogbu m na-ekele unu
3 July 2019 ka 13:00
Daalụ maka NDỤMỌDỤ, nyeere a ọtụtụ
31 January 2020 ka 8:44
Gabriela dos Reis Silva kwuru:
Sooocorro na igwe m anaghị amalite ọzọ mgbe m nyere iwu ikpeazụ ahụ.
Amaliteghachiri, mana mgbe m pịnyere aha njirimara m na paswọọdụ m iji tinye ihu ojii na-egosi (dị ka ọ bụrụ ịbanye) ma laghachi n’otu ihuenyo ịbanye aha njirimara na paswọọdụ
Kedu igwe, onye VM Debian? Gbalịa Ctrl + Alt + F1, nbanye dị ka mgbọrọgwụ. Lelee ikikere faịlụ / ndekọ ma ọ bụ ndị nwe ya: ls -la / ụlọ / USER. Hụ ma ọ bụ n'eziokwu USER bụ onye nwe ya, ma ọ bụghị, nwaa: sudo chown -R USER:USER / ụlọ / USER. Gbanwee USER na aha njirimara ị na-achọ ịbanye na ya.
William Gasperi kwuru:
ehihie ọma, Lee, ọ rụrụ ọrụ ruo mgbe akụkụ nke ịnweta pịa akara ngosi ahụ ugboro abụọ, ebe ọ bụ na m na-eme ya maka nrụnye ihe osise ( Iwu akara naanị).
Emere m ruo mgbe ahụ, ma enweghị m ike, Agbalịrị m ịnweta ya site na iwu mana enweghị m ike ịnweta ya ebe a, na-ekwu na ọ gaghị ekwe omume imeghe faịlụ ahụ.
20 Ka 2020 ka 13:52
Tooop enyi m, nyeere m ezigbo aka ebe a maka m.
27 July 2020 ka 22:37
Leonardo Montero kwuru:
dị nnọọ mma! ekele gị nke ukwuu!
31 August 2020 ka 11:17
akpaka chịkọtara ịzọpụta typescript na Visual Studio Code Na nke a post anyị ga-edozi nsogbu abụọ: 1) iwu "tsc" Ọ na-adịghị ghọtara na integrated ọnụ VS koodu, e 2) chịkọtara-adịghị arụ ọrụ na-akpaghị aka mgbe na-azọpụta faịlụ ".TS" (pịnye akwukwọ). Introdução Apenas para contextualizar, o Ty...
Copyright © 2022 taylorlopes.com ebe Oct 2012, 3.110.696 ohere